मनोविज्ञान र न्यूरोसहरू धेरै तरिकामा समान लक्षणहरू छन्, किन कहिलेकाहीँ यी अवधारणाहरू भ्रमित छन्। तथापि, उनीहरूको बीचमा एक ठूलो र धेरै फरक फरक छ। हामी न्युरोसिस र मनोविज्ञान बीचको मतभेदको जाँच गर्नेछौं, जुन उनीहरूको बीचमा अवधारणाहरू छन्।
सर्तको अर्थ शब्दकोश शब्दलाई बदल्दै, तपाइँ तिनीहरूलाई निम्न रूपमा विशेषता गर्न सक्नुहुन्छ:
न्युरोसिस मनोवैज्ञानिक कार्यात्मक रूपान्तरणीय विकारहरुको एक समूह को नाम हो। तिनीहरू सबै एक जटिल पाठ्यक्रम छ, तिनीहरूले मानसिक र शारीरिक प्रदर्शन को कम गर्न को प्रभाव छ र हिजरात्मक, तंत्रिका, घुसपैठ या asthenic अभिव्यक्तिहरु द्वारा विशेषता हो।
मनोविज्ञान, या मनोवैज्ञानिक विकार - मनोचिकित्सा को विभिन्न विकारहरुको एक समूह को नाम हो, जसमा अवधारणात्मक, भ्रम, भित्तिचित्रहरु र छद्म-भित्री स्थानहरु, डिलिरियम, डेरालाइजेशन र यति मा।
यो उल्लेखनीय छ कि न्युरोस र मनोविज्ञान को उपचार विभिन्न सिद्धान्तहरु को अनुसार हुन्छ।
न्यूरोसिस र साइकोसिसको बीच के फरक छ?
न्युरोसिस एक उल्टो विकार हो जुन ठीक हुन सक्छ, भले यो लामो समय सम्म रहन्छ। यस अवस्थामा, मरीजलाई मद्दत चाहिन्छ कि उसलाई मद्दत चाहिन्छ, यसको लागि पुग्छ। यसको कुनै पनि फारम, जसमा न्यूरेस्टेनिया, हिजराय न्यूरोसिस र जुनूनी-बाध्यकारी विकार पनि शामिल छ, उपचार योग्य छ।
मनोवैज्ञानिक मानसिक विकारहरूको एक रूप हो, र यस अवस्थामा रोगीले वास्तवमा वास्तविकतालाई बुझ्न सकेन। उहाँ मेमोरी, सोच र व्यवहारको विकार छ, यो व्यक्ति अब आफैले नियन्त्रण गर्न सक्षम छैन। यो उल्लेखनीय छ कि यी दुई पूर्णतया फरक राज्यहरू छन्, र न्यूरोसिस मनोवैज्ञानिकमा जान हुँदैन।
यस तथ्यको बावजूद कि न्यूरोस र प्रतिक्रियाशील मनोवैज्ञानिक उनको लक्षणमा समान हुन सक्छ, यी बिल्कुल फरक समस्याहरू छन्। प्रायः तिनीहरू रोगीको क्षमतामा उनीहरूको समस्याका बारेमा सजग हुन र एक तरिका खोज्न फरक हुन्छन्।
हास्यको भावना कसरी विकास गर्ने?
साथीसँग कसरी मिलाउने?
कसरि भन्न को लागि "no"?
मित्रता को मनोविज्ञान - के वास्तविक मित्रता के हो?
रंग उपचार - उपचार
वरपरको संसारको वैज्ञानिक पहिचान
के सुन्तला स्यान्डल लगाउने?
वजन घटाने को लागि Celery सूप
पार्क, जस्तै बोजोवो
के म राडोनेटा को लागि बागान मा काम गर्न सक्छु?
पटिसको साथमा पर्खालहरू मिलाउनुहोस्
पेट अल्सर र डुडीनल अल्सर
के पूर्व कामको बारेमा सपना देख्छ?
गर्भवती महिलाहरु मा एएफपी
बच्चाको लागि बालबालिका
अन्ना फारसले जीवित पुस्तक "अयोग्य"
टाउन हॉल (घन्ट)
के डेकोपियो पुतिन प्ले गर्न चाहानुहुन्छ?
जुम्बामा बस्न अभ्यास गर्दछ
सबभन्दा तातो महिलाको सर्दिया जूता
इनडोर बिरुवाहरु को लागि जल निकासी